Suavecito Firme Hold Pomade Review – The Myanmar Gentlemen Supplies
Suavecito Firme Hold Pomade Review
January 03, 2018 • Suavecito Review
ဆံပင်ကို တစ်နေ့တာ လုံးဝပုံကျနေမှကြိုက်တယ်ဆိုသူတို့အတွက် တောင့်တောင့်တင်းတင်း၊ ပုံမပျက်စေသည့် အကောင်းဆုံး Strong Hold ထိန်းအားရှိပြီး၊ ဆံသားကို Medium Shine နှင့် တောက်ပြောင်နေစေသည့်၊ ခေါင်းလျှော်ရလဲလွယ်ကူသော အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Water-Based Pomade အမျိုးအစားခေါင်းလိမ်းဆီ...
Suavecito Firme Hold Pomade ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်.... ?😏
#mmgents မှပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အပြင် Packaging ကတော့ မိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း လက်ဆောင်ပေးဖို့အသင့်နဲ့ လုံချုံမှုအပြည့်မို့လို့ တစ်ခုချင်းမပြောတော့ပါဘူး။ 😁
အတွင်း Pomade ဘူးကတော့ ကျောပိုးအိတ်တွေ ဘေးလွယ်အိတ်တွေထဲ အလွယ်တကူ ထည့်သယ်သွားလို့ရတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကော်သား အဖြူဘူးလေးပါ။ ဒီဇိုင်းကိုတော့ Suavecito ရဲ့ Mascot ဖြစ်တဲ့ အရိုး Hombre လေး ကေသနေပုံနဲ့ Pomade ရဲ့အချက်အလက်တွေရေးပေးထားပါတယ်။
ဘူးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပထမဦးဆုံး ရမှာကတော့ Suavecito ရဲ့ Signature သံပုရာ နဲ့ Coca-Cola အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားသလို တစ်နေကုန် လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိစေမဲ့ Cologne Type အနံ့ပါ။ Customer အများစုကလည်း အဲ့ဒီအနံ့ကိုသဘောကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျ။
3. ခေါင်းလိမ်းဆီရဲ့ အသွင်အပြင်အနေအထား
အတွင်းက Pomade ကတော့ လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီး Water-Based မို့ အကြည်လေးနဲ့ Gel အမျိုးအစားလိုမကျဲပဲ အပျစ်အခဲပုံစံမျိုးပါ။
Pomade ကိုဘူးထဲမှ ကော်ယူရတာလည်းလွယ်ကူပြီး၊ အရည်ပျော်သွားအောင် ပွတ်တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခြောက်ကပ်ခြင်းမရှိပဲ ဖီးလိမ်းတဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးမဲ့ စေးကပ်မှုကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။👍
လိမ်းပေးတဲ့အချိန်မှာ Pomade က ဆံပင်ထဲကို ဆီလိမ်းသလို အခက်အခဲမရှိပဲ အလွယ်တကူဝင်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဆံပင်ကိုအရမ်းပိကျသွားခြင်းလဲမရှိပဲ အနေတော် weight ရှိပါတယ်။ ဘီးအသုံးပြုသူတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့အနေအထားပါ။
Suavecito Firme Hold Pomade ကို ဆံပင်စိုစို/ခြောက်ခြောက် ဘယ်အနေအထားမှာမဆို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ခြောက်အောင်သုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ Suavecito Firme Hold Pomade ရဲ့ စူပါပါဝါ ဖြစ်တဲ့ Strong Hold နဲ့ Medium Shine ကိုရမှာပါ။ ရေအနည်းငယ်အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Shine ပိုရပြီး၊ Hold တော့ကျသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့ရဲ့ သဘောကျဆုံးအချက်ကတော့ ပုံသွင်းရလွယ်ကူခြင်းပါပဲ။ ကျနော့လိုမျိုး ဆံပင်ထူသူတွေ၊ ရှည်သူတွေအတွက်တော့ ဖီးရလိမ်းရတာ ခြောက်မသွားပဲနဲ့ စိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့လက်တို့ရဦးမယ်ဗျ။ အလိုက်ဖက်ဆုံး စုံတွဲတွေကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ David နဲ့ Victoria Beckham ပြီးရင် Pomade နဲ့ ဘီးနဲ့ ဖြစ်လောက်တယ်ဗျ။ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံစံကို ဘီးကပေးသွားတာပါ။ Gentleman Look ကိုသွားဖို့အတွက် ဘီးခပ်စိပ်စိပ်နဲ့ သေသေချာချာဖီးပေးနိုင်ပါတယ်။ Casual Look သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘီးနဲ့ဖီးထားတဲ့ ဆံပင်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးပြီး နဲနဲဖွပေးရုံပါပဲ။
Suavecito Firme Hold Pomade က ပုံသွင်းပြီးဆံပင်ကိုတောက်ပြောင်မှုပေးပြီး ခန့်ခန့်ညားညားရှိစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Slickback ပုံလှန်ဖြီးမယ်ဆိုရင်လဲ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ဆံပင်ကိုထိန်းပေးထားနိုင်သလို Pompadour အမောက်အတွက်လဲ ထုထည်ကောင်းကောင်းပေးပါတယ်။ ဆံပင်အကောက်သားရှိသူတွေအတွက်လည်း ဘီးအသုံးပြုပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထိန်းပေးထားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် Suavecito Firme Hold Pomade ကိုအသုံးပြုမယ်ဆို ဘီးတစ်ချောင်းကတော့ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Suavecito Firme Hold Pomade ရဲ့ Hold ကတော့ Strong Hold type ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်ကိုခံပါတယ်။ လိမ်းရင်လိမ်းသလောက်လဲ Hold ကိုမြှင့်တင်ပေးသွားပါတယ်။ Spray တွေလည်းမလိုသလို၊ Gel တွေလို ခြောက်ခဲသွားခြင်းမရှိပဲ၊ စိုစိုတောင့်တောင့်လေးနဲ့ တော်ရုံတန်ရုံလှုပ်ရှားမှုလောက်တော့ ၆ လက်မဆံပင်အရှည်က တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ် အငြိမ်ပါပဲ။
တစ်နေ့လုံးလည်း ထိန်းအားမကျသွားပဲ အချိန်မရွေး ရေအနည်းငယ်ပြန်သုံးပြီး ဆံပင်ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ တစ်နေကုန် ဆံပင်လည်းခြောက်သွားခြင်း ၊ အဖြူဖတ်တွေထွက်လာတာမျိုးတွေ မရှိပဲ၊ ဆံပင်အရောင်တောက်ပမှုကိုပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Suavecito Firme Hold Pomade က Water-Based ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခါခေါင်းလျှော်ရုံနဲ့တင် အိုကေမှာစိုပြေပါတယ်။ နောက်ရက်မနက်မှာလည်း တကယ်လို့ခေါင်းမလျှော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ရေနည်းနည်းစွတ်ပြီး ကေပြန်သ လို့ရသေးတယ်ဗျ။
8. နိဂုံး သုံးသပ်ချက်များ
Suavecito Firme Hold Pomade က ဆံပင်အရောင်တောက်တောက်နဲ့ ဘေးခွဲ၊ လှန်ဖြီး၊ အမောက် အစရှိတဲ့ပုံစံတွေသွားဖို့သင့်တော်ပါတယ်။ ပွဲနေပွဲထိုင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးတက်၊ ကျောင်းတက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ပုံကို တစ်နေ့တာလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင် အငြိမ်ဖြစ်နေစေခြင်သူတွေအတွက် သင့်တော်မဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီပါ။ အချိန်မရွေး ရေအနည်းငယ်နဲ့ ဆံပင်ကိုပြန်ပြင်နိုင်တာကလည်း အတော်အဆင်ပြေတဲ့အချက်တခုပါပဲ။ ဘယ်လိုအချိန်အခါမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Stable Product တစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်နိုင်တဲ့အတွက် McDonald’s of Pomades လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသေးဗျ။
မိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်း Suavecito Firme Hold Pomade က ဘယ်လို နေ့စဉ် စိတ်ကျေနပ်မှုတွေပေးစွမ်းနိုင်မလဲဆိုတာ The Myanmar Gentlemen Supplies မှာ စတင်၍ အဖြေရှာကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Strong All Day Hold (No Sprays Required)
No white flakings unlike Gel
Restylable and Wash Out Easily With Just Water
အရည်အသွေးမြင့် အမျိုးသားခေါင်းလိမ်းဆီများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်လီ၊ လက်ကား ရရှိနိုင်ပါပြီ။
မှာယူရန်နှင့် ကြည့်ရှုရန်... 👇
📱Facebook Messenger: m.me/mmgents
🇲🇲#mmgents နှင့်အတူ ပုံမှန်များထဲမှဖောက်ထွက်လိုက်ပါ။
Suavecito - Firme Clay Pomade Review
Uppercut Deluxe - Matte Pomade Review
Uppercut Deluxe - Featherweight Review
Uppercut Deluxe - Deluxe Pomade Review
Suavecito Oil Based Pomade Review